सीता दाहालको उपचारमा किन जानु पर्यो अमेरिका ? खासमा के भएको हो उहाँलाई ?
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइन २०७५ चैत ३ गते आइतवार
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि आइतबार बेलुकि अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएको छ।
सीता दाहाल पार्किन्सन जस्तो एक प्रकारको जटिल रोगले पीडित हुनुहुन्छ । अमेरिकामा सो रोगको उपचारको व्यवस्था राम्रो हुने कुरा त्यहाँ रहेका केही साथीहरुले भनेपछि पत्नी सीताको उपचारका लागि आफू अमेरिका जान लागेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा संचारकर्मीमाझ पत्नी सीताले पनि आफूले एक पटक अमेरिका गएर स्वास्थ्य उपचार गर्ने मनसाय राखेपछि आफू उपचारका लागि अमेरिका जान लागेकाे अध्यक्षको स्पष्टोक्ति थियो ।
अध्यक्ष दाहालले यस अघि सो रोगको उपचारका लागि पत्नी सीतालाई आफूले सिंगापुर पुर्‍याएको र केही समय त्यसले सहज बनाएको स्मरण गराउनुभयो ।
दाहाललाई अमेरिकाको बाल्टिमोरस्थित ‘जोन हकिन्स’ अस्पतालमा उपचार गरिनेछ । वासिङ्टनमा रहेको एक अर्को सो रोग सम्बन्धी रिसर्च सेन्टरमा पनि पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने योजना रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो ।
दाहालका साथमा छोरी गंगा दाहाल र र ज्वाई जीवन आचार्य पनि अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएको छ।एक हप्ता भन्दा बढी उपचारको समय लागे पत्नी सीतालाई छोरी–ज्वाँइको साथमा छाडेर स्वदेश फर्कने योजना रहेको अध्यक्षले जनाउनुभएको छ ।
वाइसिएलले गर्याे विदाइ
अध्यक्ष परिवारलाई विदाई गर्न विमानस्थलमा सरकारका मन्त्रीहरु र पार्टीका उच्च तहका नेताहरु पुग्नुभएको थियो ।
वाइसिएल र शुभचिन्तकहरुको भिड लागेको थियो । उनीहरुले खादा ओढाएर अध्यक्ष परिवारको शुभयात्राको कामना व्यक्त गरेका थिए ।
यस्तो छ अध्यक्ष पत्नी सीता दाहालको समस्या
सीता दाहाल पार्किन्सन जस्तो देखिने एक प्रकारकाे जटिल रोगले पीडित हुनुहुन्छ । त्यसलाई ‘प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी’ (पी.एस.पी.) भनिन्छ ।
पीएसपी एक दुर्लभ स्थिति हो, जसका कारण मानिसको मानसिक असहजताका साथै हिँड्न, बोल्न र निल्नसमेत कठिन हुने गर्छ । मस्तिष्कको कोषिकामा क्षति हुँदा यस्तो समस्या देखिने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
छोरा प्रकाश दाहालको असामयिक निधनपछि सीता दाहाललाई रोगले झन च्यापेको छ । त्यसैले सीताको मन बहलाउन अध्यक्ष प्रचण्डले बेला–बेला विभिन्न ठाउँमा घुमाउन लगेका समाचारहरु आउने गरेका छन्।
केही समय अगाडि पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलसहित अध्यक्ष प्रचण्ड र सीता दाहाल म्याग्दीको तातोपानी कुण्डमा पुगेर स्नान गरेको तस्वीर समाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । सीताको उपचारकै सिलसिलामा तातोपानी कुण्डमा पुगेको बताउने गरिएको छ।
अमेरिका लैजानुअघि सीताको उपचार भारत र सिंगापुरमा पनि गरिएको थियो । तर, पनि उहाँको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन ।
के भन्छन् डाक्टर
काठमाडौंको वीर अस्पतालका सिनियर डाक्टर सुनिल कोइरालाका अनुसार पार्किन्सन दुई प्रकारको हुन्छ । हातखुट्टा काँप्ने, जिउ अररो हुने जस्ता लक्षण भएको पार्किन्सन्सको उपचार नेपालका बिभिन्न अस्पतालमा हुने गरेको छ । अर्को पीएसपी पार्किन्सन हो । त्यसमा स्मरण शक्ति कम हुँदै जाने, लड्ने, अडिन नसक्ने, जिउ अररो हुने पनि हुन्छ । यो रोग पूर्णरुपमा निको हुँदैन, रोकथाम गर्न मात्रै सकिन्छ । अध्यक्ष पत्नी दाहाललाई दोश्रो प्रकारको पार्किन्सनको आशंका गरिएको छ । यसको उपचारविधि भनेको औषधि र अपरेसन हो । औषधिले ठीक नभएमा अपरेसन गर्नु पर्ने डाक्टर कोइरालाको भनाई छ ।
यसको लक्षण समय अनुसार गम्भीर हुने गर्छ । सुरुवाती चरणमा यसको लक्षण अन्य रोगजस्तै हुने भएकाले यो रोग पत्ता लगाउन मुश्किल हुन्छ । यद्यपि हिँड्न, डुल्न, बोल्न र निल्न कठिन भएमा, लड्छु कि भन्ने डर लागिरहेमा, व्यवहारमा परिवर्तन आएमा, मांसपेशी कस्सिएमा, आँखाको चाल नियन्त्रणमा नरहेमा र स्मरणशक्ति हराउँदै गएमा पीएसपीको शंका गर्नुपर्ने डा‍‌क्टर काेइराला बताउनुहुन्छ।
अमेरिकामा पनि यो रोगको पूर्णतया निदान नहुने हुनाले पिरवारकाे हेरचाह र बिरामीको उच्च मनोबलले मात्र यो रोग नियन्त्रणमा रहन सक्ने डा. कोइराला बताउनुहुन्छ।
पछिल्लाे - इथियोपियन एयरलाइन्स दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका १५७ जनाको अन्तिम संस्कारका लागि माटो दिइने
अघिल्लाे - मुलुकमा नयाँ द्वन्द्वको खतरा, विप्लवसहित नेता-कार्यकर्ता पक्राउ गर्न सरकारद्वारा सर्कुलर जारी